Jilaa reer Hindi ee Amadi oo sheegay inuu booqanayo Somalia. - iftineducation.com
iftineducation.com – Jilaaga inta badan filimada Hindiga ugu qeyb qaata commediga ama qosolka ee la yiraahdo Johny Lever oo dadka Soomaaliyeed u yaqaan Amadi ayaa ka dhawaajiyay inuu booqon doono magaalada Muqdisho.
Amadi oo u waramayay warbaahinta dalka Hindiya ayaa xusay in uu aad u jecel yahay inuu tago Soomaaliya iyo dalal kale oo Africa ah oo aad looga taageero.
Jilaagaan ku caan baxay Commediga iyo shactarada ayaan xusin xiliga rasmiga ah ee uu booqon doono Muqdisho iyo ujeedada uu ka leeyahay, balse wuxuu tilmaamay in si weyn looga taageero Soomaaliya iyo dalalka kale ee Africa.
John Lever oo Soomaalida u taqaan Amadi ayaa aad u xiiseeya filimada uu ku jiro, iyadoo filimada uu ku jiro ee Hindiga ee lagu turjumo af-Soomaaliga waxaa codkiisa jila shactariistaha kale ee Soomaaliyeed Jeeri iyo Ajakis.
DAAWO Soomaalidii dishay labadii wiil ee Ingiriiska lagu dilay oo lasoo qabtay lana xakumay (Talow Maxaa lagu xakumay)